PSJTV | चीनबाट ल्याइएका विद्यार्थीलाई सोझै क्वारेन्टाइन लगियो, अब लीलामणिलाई के गरिन्छ?
सरकारले कोरोना त्रासका कारण चीनबाट स्वदेश फर्काइएका विद्यार्थीलाई साझै खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा राख्यो। मात्रै एउटा उडान गरेर फर्किएका चालक दलका सदस्यहरूलाई पनि नगरकोटमा अलग्गै बसाइयो।
सरकारले उता पढिरहेका आफ्ना विद्यार्थीको स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै त्यसो गर्‍याे। अर्काे राम्रो पक्ष के भने कसैलमा पनि त्यस्तो रोग फेला परेन। अब अर्काे प्रश्न उठ्छ– सवा ३ वर्षदेखि चीनमा राजदूत रहेका लीलामणि पौडेल चैतको दोस्रो साता घर फर्किंदा के हुन्छ?
उनी त्यहाँको सरकारी अधिकारीसँग बिदाइ भेट गर्ने, बोरिया बिस्तर कस्ने काममा जुटेका छन्। यो खबर आज फागुन २८ बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेशमा आएका हरेकको मिहिन पाराले अध्ययन हुन्छ, स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ, शंकास्पदलाई टेकु अस्पताल र क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ। तर लीलामणिलाई के गरिन्छ?
कर्मचारी नहुँदा भारतमै रोकियो नेपाल आउने रेल
ललिता निवास प्रकरण : पौडेल र रेग्मीको जग्गा सुटुक्क सरकारको नाममा ल्याइयो